← Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha
Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti →
Jaalalii dura waan hunduma akka ta’e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba’a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta’u iyyu male, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osoo hin tane, wal-dhibdee akkata itti hiikan beeku fi dhimmamani hiika yookin furii wal-dhabdee barbaduu dha.
MAREE: Nama jaalachuun attamin mul’ata? Nama tokko jaalachuun yeroo attami mul’ifama jette yaadaa?
MEE ITTI YAADII: Jaalalii dhimma miiratti immo dhimma murtotti (princilpe)?
SEENSA: Namni jiraata waan ta’ef jireenya keessatti namoota bira waliin walti bu’un waan jiru. Namni miira qabu tokko aaruun, dhalanuunis waanuma hin hafnedha. Eega yeroo rakkini tokko dhalatu—yeroo wal-dhibdeen argamu attamitti dhimma kana gara hiikaatti geesuun danda’ama? Sagaleen Waaqayyo wa’ee kana maal nuun jedhaa? Mee Maatewos 18:15-17tti dubbiis.
Jireena kessatti dubbi inni rakkisan wal-dhabdeen argamu isaatti immo wal-dhabdee jiru tokko fudhachuu (acknowledge gochuu) dhabudha jetta (Fak. 28:13)?
Namni nuu yakke tokko “obbolessa” immo “diina” keenya? Ati nama sii yakke tokko attamitti isa hubataa (Lk. 15)?
Obbolessi kee yeroo sii yakku nama bitaa fi mirgaa waamte yakka isa itti labsita immo kophaatti isa biraa dhaqta (Lk. 15)?
Obbolessa sii yakke tokko waliin kophaatti haasaa’un bu’a malii qaba? Yoo dubbi isa bakketti facaasne maaltu ta’a? Maaliif?
Akkeki nama sii yakke bira dhaqu maal? Namciha yakkaa ta’u isaa beksiisuudha immo jaalala deebifachuudha?
Nama tokko ykn lama qabatanii obbolessa yakki irratti argame tokkon waliin haasa’un bu’a maalii qaba? Akkekki isa maal?
Walda Kristiyanaatti dubbi kana fiduun maaliif barbachiise? Akka Waldaan gara kee gortee namicha sana ari’atuuf immo ofi kees aangoo Waldaa jala galchuuf?
Akka nama “hin amaniniifakka qaraxxuu hin amanamneetti haa lakkaa’amu” yeroo jedhu maal jechuu isatti?
Obbolessa sii yakke tokko deebifachuuf itti gafatamni kan kee eessatti dhuma?
Goofta isa utuu abdi hin kutattiin sii barbadee, yakka kee isa bayye siif dhiise galata gaara irra madde galchi. Atis akka isa obboloota sii yakkaniif dhiisu akka dandesuuf humna fi hubbana akka siif keenuuf kadhadhu.
“… you’ll have to start over from scratch, confront him with the need for repentance, and offer again God’s forgiving love.” Mat. 18:17 MSG—dubbin kun dubbi ciimaadha. Mee itti yaadii.
Akkuma asi olitti dubbatame, wal-dhabdeen waan jireenya keessatti nama qunnamuun keessa isa tokko. Wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesifne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya ti. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osoo hin tane, wal-dhibdee akkata itti hiikan beeku fi dhimmamani hiika yookin furii wal-dhabdee barbaduu dha.
Jireenya keessatti wal-dhabdeen waan ga’u danda’u ta’u isa hubachuu barbachiisaa dha. Yeroo wal-dhabdeen dhalatu, humna fi yeroo wal-dhabdee sana dhoksuuf fixu irra wal-dhabdee sana beekani hiika yookin furii isa barbadutu waan sirii dha. Dhugumaa “Namni irra-daddarbaa isaa dhokfatu, hin hiiqu; namni irra-daddarbaa isaa himatu, kan dhiisus garuu araara in argata” (Fak. 28:13).
Namni nu waliin wal-dhabe “diina” keenya utuu hin tane “obbolessa” keenya ta’u isa beekun, hubachuun, irra dedebi’ani xinxaluun bayye barbachiisa dha. Namni dubbi ykn dhiima tokko sababa adda addaa irra kan ka’e akka biratti hubachu ni danda’a. Yeroo kun ta’u amma nuuf danda’ametti bakka nama sanaa tane hubachuuf yalutu nuuf ta’a male nama sana akka diinatti hedne itti boba’un sirii miti. Akkasi gochuun jaalanes jibbines namaa Waaqayyo ta’u alatti nu geesa.
Nama nuu waliin wal-dhabee tokko bira dhaqne furii barbaduun dhiima keenya ta’u qaba. Akkekki nama nu waliin wal-dhabe bira dhaqnuuf namicha sana hadhesine ofi keenya “nama gaarii” fakkesine mul’isuuf miti. Namicha deebifachuuf, firooma isa hambifachuuf male.
Wal-dhabdee dhalate fira mirgaa fi bitatti bilbillan labsun, namicha nu waliin wal-dhabee hadheesuun, maqa ballesuun, lafafuun, daboo itti waaman jibuun, jibisiisun fi kkf gochuun hojji nama Waaqayyo miti. Wal-dhabdeen sun namoota wal-dhabaan laman giddutti dhumu qaba. Namni biran dhiima akkasi keessa galun kan malu akka sagaleen Waaqayyo nu barsiisuutti ta’u qaba.
Namni nu waliin wal-dhabee tokko namoota akka sagalee Waaqayyootti dubbi ilaalani fi Walda Kristiyana dhaga’u yoo dide “si biratti akka nama hin amaniniif, akka qaraxxuu hin amanamneetti haa lakkaa’amu” yeroo jedhu, namicha sana akka diinatti heddi itti dhiis jechuu isa miti. Akkuma namni Gooftatti hin amaniin jiru tokko gara Waaqayyo dhufe akka fayyu, araara Waaqayyo irra akka hirmatu barbaduu fi sagalee misirachoo itti himun itti gafatama kee akkuma ta’e namni kunis karaa inni gara araara fi ayyana Waaqayyootti itti dhufu barbaduun, isaf kadhachuun, waa’ee isa dhiimamuun si irra jiraa jechu isa ti male. Itti gafatamni ati obboleessa keef qabdu amma araarii Waaqayyo diriree jirutti itti fufaa.
Furii Wal-Dhabdee — 1 Comment
Addisuu Bekele on June 6, 2016 at 9:22 am said: